Sh Cali Gumca“ Boqoradda Ingiriiska Awoowgeeda wuxuu ka soo jeedaa reer Bani Hashem, qoyska Nabiga” . - Awdinle Online
Sh Cali Gumca“ Boqoradda Ingiriiska Awoowgeeda wuxuu ka soo jeedaa reer Bani Hashem, qoyska Nabiga” .
Sheekh Masaari ah oo ka hadlay laba arin oo Muran badan ka Abuuray dalka Masar !!
Hadal uu jeediyay Muftigii hore ee dalka Masar Sh Cali Gumca ayaa muran badan dhaliyay ka dib marka uu sheegay dhismaha Ahraamaadka (Pyramids) in uu bilaabay Nabi Idriis CS iyo in Taalada Abu Al-huul (أبو الهول) ee caan ka ah Masar in ay tahay Taalo isaga lagu xusuusanayo.
Sheekh Cali Gumca oo xubin ka ah Hay’adda Culumada waa weyn ee Azhar islamarkaasina ahaan jiray Muftiga guud ee Masar oo ka hadlay TV Qaranka gaar ahaan barnaamika ‘Masar waa Dhulkii Anbiyada” ayaa sheegay in ay jiraan Oraahyo culumada rajaxayaan oo badan in Nabi Idriis CS in uu bilaabay dhismaha Ahraamaadka iyo cilmiga xifdinta Jirka Maydka, sidoo kale Wajiga Taalada Abu Al-huul, waa wajiga Nabi Idriis ayuu raaciyay hadalkiisa.
Ma ahan markii ugu horaysay oo Sh Cali Gumcah hadalkaan sheegay, waxa uu hadalkan oo kale yiri sanadii 2015, isaga oo xusay in Nabi Idris CS in magaciisa Kitaabka Towraad loogu yeero Akhnuukh, waxa uuna ahaa nin xikmad badan ayuu yiri Sh Cali Gumcah.
Sidoo kale Sheekha ayaa hoosta ka xariiqay in Nabi Idriis ahaa qofkii ugu horeeyay Qalin wax ku qora, dharna tola. “Waxa uu Tusaale u yahay Nabi Idris Xikmadda, iyo Culuumka Xisaabta iyo Xidigiska, Abu Al-huul waa Taalo muujinaysa Nabi Idris, sida ku cad mid ka mid ah buugaagta taariikhda’ Ayuu yiri Sh Cali Gumca.
Hadal cusub ee ka soo yeeray Sh Cali Gumca ayuu ku sheegay in Magaca Nabi Idriis in lagu sameeyay baaritaano bada, isaga oo intaas ku daran in ay jiraan Oraahyo sheegaya in Idriis in Naftarkiis yahay magaca Osiris ay ka hadlaan faraacinada hore.
Mufti hore wuxuu yiri: “Firaacinadu waxay u adeegsan jireen muujinta waxyaabaha ay xurmeeyaan qaab shimbireed, xayawaan, ama Noole kale, laakiin Taalada Abuu Al-hool “Sphinx” waxay ku muujiyeen qaab Bini’aadam ah, kaasoo u dhigma erayga ahaan macallinka koowaad, Xikmad badanaha, iyo inuu Nabigani weyn baray Aadanaha waxyaabo ka hor ilbaxnimada.”
Isaga oo sii wata hadalka ayuu yidhi Sh cali Gumca “Archeologists waxay qaadeen dhabo kale, maadaama ay dhaheen Sphinx ama Abu Al-huul wuu ka horeeyay Ahraamaadka, sidaas darteed Sayidkeena Idriis ma ahan Khufu, Khafrac, ama Menqarac.”
Dhinaca kale, Sh Cali Gumca ayaa sidoo kale, ka hadlay arin kale oo muran badan abuurtay, taasoo ah; hadalkiisii ku saabsanaa Nasabka iyo Asalka boqoradda Ingiriiska Elizabeth, oo uu sheegay in ay ka soo jeedo qoyska Nebi Muxammad CS, laakiin awoowgeeda lagu qasbay in uu qaato Diinta Masiixiyadda.
Inta uu ku guda jiray Sh cali Gumca waraysi uu siinayay Tv gaar loo leeyahay ee dalka Masar wuxuu yiri, “ Boqoradda Ingiriiska Awoowgeeda wuxuu ka soo jeedaa reer Bani Hashem, waxay ka soo jeedaa qoyska Nabiga, Maxay marka boqoradda (Elizabeth) u noqon waysay Muslim? Sababtoo ah Awoowgeeda ayaa lagu qasbay in uu diinta Islaamka ka tago, sida horay ugu dhacday Muslimiinta ku noolaa Spain.
Arimaha uu ka dhawaajiyay Sh Cali Gumca ayaa noqday hadal haynta ugu badan baraha bulshada Masaarida, Tv-yada maxaliga iyo guud ahaan Aqoon yahanka Masaarida oo si weyn ugu hadlay arimahaasi.
W/Q: Hussein Sahnuni
Previous articleCilmi Bare: Cabdinuur: Doorasho Qof iyo Cod Suurtagal Ma Ahan inay Dalka Ka Dhacdo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaaday labo ka mid ah Guddoomiye kuxigeenad G/Banaadir